Led open sign, Open sign, Open Neon Light mpanamboatra sy mpamatsy any Sina
Description:Led Open Sign,Open Sign,Sokafy ny fahazavana Neon,Neon Fanilo Misokatra Neon,,
Home > Products > LED Neon Light Signs > Open Sign
Ny vokatra avy amin'ny Open Sign , mpanofana manokana avy any Shina, Led Open Sign , Open Sign mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Sokafy ny fahazavana Neon R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
SORATRA MITOMPOANA sy SAZAVA KENAKA  Contact Now
LED NEON STORE OPEN SIGN LIGHTS  Contact Now
TONTOLO NEON OPEN SIGN  Contact Now
HITANAO NEONSY MANDROSOANA AN-TRANONY  Contact Now
MITADIA LED NEON SIGN  Contact Now
LED NEON BAR NISY LOHATENY  Contact Now
LED SORATRA MANGATOKY NIFIDIAVANA  Contact Now
ASA FITAOVANA AN-TRANO FAMPISORANA FARANY  Contact Now
SORATRA MITOMPOANA sy SAZAVA KENAKA
LED neon misokatra famantarana mihidy ho an'ny fivarotana, fivarotana, bar, trano fisakafoanana, toerana be asa maro. Fivarotana misokatra 24hrs. Izy io dia vokatra malaza. Fitaovana ON / OFF azo ampiasaina, afaka mampifanaraka ny banky...
TONTOLO NEON OPEN SIGN
C omm komersial dia nandrehitra famantarana misokatra ho an'ny fivarotana spa, fivarotana fivarotana, dobo, salon, fivarotana fantsika, tora-pasika, klioba, fivarotana fivarotam-panafody & fivarotana fivarotana. Tsy famantarana famantarana...
HITANAO NEONSY MANDROSOANA AN-TRANONY
Ny vaovaon'ny divay neon LED dia nanidy famantarana ho an'ny fisotroana fisakafoanana, trano fisakafoanana, bar disko. Izy io dia vokatra malaza. Fitaovana ON / OFF azo ampiasaina, afaka mampifanaraka ny banky herinaratra DC12V ihany koa....
MITADIA LED NEON SIGN
Toetoetra Famolavolana: mihidy mihidy ny bara Loko: loko maro azo Refy: Custom Halavan'ny tariby mahazatra: 2m Plug-In: Eny Karazan-jiro: Tady mahazaka neon LED Karazana vokatra: Famandrihana fisokafana Neon
LED NEON BAR NISY LOHATENY
Ny vaovaon'ny divay neon LED dia nanidy famantarana ho an'ny fisotroana fisakafoanana, fisakafoanana, trano fisotroana. Izy io dia vokatra malaza. Fitaovana ON / OFF azo ampiasaina, afaka mampifanaraka ny banky herinaratra DC12V ihany koa....
LED SORATRA MANGATOKY NIFIDIAVANA
Fahazavana mihidy misokatra mihidy ho an'ny gara petro, fivarotana, fivarotana, trano fisakafoanana, fisotroana divay, bar disko. Izy io dia vokatra fandraharahana malaza. Loko tokana sy maro loko azo. Fivarotana Espaniola sy petro Fitaovana ON...
ASA FITAOVANA AN-TRANO FAMPISORANA FARANY
Fantsom-baovao mihidy misokatra LED ho an'ny fivarotana, fivarotana, trano fisakafoanana, fisotroana divay, bar disko, tobin'ny petro. Izy io dia vokatra malaza. Loko tokana sy maro loko azo. Fivarotana Espaniola sy petro Fitaovana ON / OFF...
Shina Open Sign mpamatsy
Fahazavana misokatra vita amin'ny hazavana LED. Angovo mahomby, 70% ambany noho ny fantsona gony neon nentim-paharazana. Lalana mena sy haingam-pandeha mena namboarina ho an'ny OPEN.
C omm komersial dia nandrehitra famantarana misokatra ho an'ny fivarotana spa, fivarotana fivarotana, dobo, salon, fivarotana fantsika, tora-pasika, klioba, fivarotam-panafody sy fivarotana fivarotana. Tsy famantarana famantarana misokatra retro neon ihany fa mariky ny haingo ho an'ny varavarankely amin'ny kafe, pub, pizza, bakery ary mofomamy rehefa jiro ny neon.
E asy fametrahana. Apetaho eo amin'ny varavarankely ny fametahana adhesive (ampidirina), avy eo dia ahantona amin'ny andry vy (ampidirina).
S afety, maharitra ela & fandidiana mora. Mampiasà UL misy lisitra LED neon voatanisa & fantsom-bolo ambany DC12V adapter (ampidirina), antoka azo antoka. Tsy misy ny bateria sy ny fanaraha-maso lavitra izay tsy misy fiasa rehefa tsy misy banga ny sela finday lavitra (sarotra ho an'ny mpampiasa tsotra ny manolo ny bateria sela) na very ny fitendry.
Famantarana tokana. Izy io dia asa tanana vita tanana nataon'ilay mpanakanto. Isaky ny hazavana OPEN neon napetaka amin'ny hazo akrilika amin'ny tanana.
Led Open Sign Open Sign Sokafy ny fahazavana Neon Neon Fanilo Misokatra Neon Led Neon Signs